Banyere Anyị - Xinhong Mech & Elec Co., Ltd.
okpomọkụ ígwè obibi
Rosin ígwè obibi
Ibe Ihu Ihu Ala
Akwụkwọ Nyefee Okpomọkụ
Obere Nyefee Vinyls
Ntọala na 2002, Xinhong Group hazigharị ma gbasaa ọrụ ya na 2011, na-elekwasị anya na nyocha na mmepe, nhazi na ịkwalite akụrụngwa nyefe ikuku maka afọ 18. Xinhong Group enwetawo asambodo njikwa njiri mara nke ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 site na ngwaahịa CE (EMC, LVD, MD, RoHS), wee nweta ọtutu ikike nke ụlọ na nke mba ọzọ. Ndị otu Xinhong na-akwado nkà ihe ọmụma azụmaahịa nke ndị ahịa mbụ, ịnakwere mgbanwe, ọrụ otu, mmasị, iguzosi ike n'ezi ihe, na nraranye. Gaa n'ihu mkpa ndị ahịa, anyị na-agbaso omume nke ijere ndị ahịa ozi ka mma, ma kpebisie ike ịmepụta ngwaahịa na ịkwalite ahụmịhe nke onye ọrụ, otu ndị ahịa dị ukwuu ga-anụ ngwaahịa dị elu, kwụsiri ike, na ọnụ ala. Ngwaahịa nke Xinhong Group mepụtara bụ maka ijere ndị ahịa ise ahịa. Xinhong Group ji obi eziokwu kpọọ ọtụtụ ndị mmekọ mmekọrịta ka ha sonyere, ma webata ngwaahịa ndị ọzọ nke Xinhong n'ime obodo ya maka ndị ahịa ọzọ ịkekọrịta ngwa ahịa dị oke ọnụ ma dị ọnụ ala!
● Crafts & Ihe omume ntụrụndụ
Usoro isiokwu a gụnyere EasyPress 2, EasyPress 3 na MugPress Mate, ndị na-eje ozi nka na ndị na-anụ ọkụ n'obi. Ndị ọrụ nwere ike iji igwe na-ede ozi obere. Crafts DIY na-enyere aka ịzụlite nkà nke onwe ya, hazie onyinye na ibe ha iji wulite ọbụbụenyi n'etiti ndị enyi ma kwalite nkwekọ ezinụlọ
Ngwaọrụ a gụnyere akụrụngwa, gụnyere igwe na-ebugharị okpomoku, igwe pịa, igwe pịa, ngwa nbi akwụkwọ, bọọlụ, ngwa nbiakwa, wdg. Ngwaọrụ ndị a na-ezute nhazi onyinye onyinye nke ukwuu na mmezu nke DIY, ma na-emetụta ọfụma maka ngwaahịa ndị a. dịka sublimation, nnyefe ikuku, vinyl na-ere ọkụ, rhinestones na ndị ọzọ. Ndị ọrụ nwere ike ịzụta ndị na-ebi akwụkwọ dị ka EPSON na Ricoh iji mezuo sublimation na nyefe ikuku, ma ọ bụ zụta ihe nkpu ịkpụcha iji kwekọọ vinyl na-ebugharị ọkụ (HTV), nke a na-ejikarị na uwe, akụrụngwa egwuregwu, nhazi nke onyinye, wdg.
Office Ọfịs nhazi Ọkachamara ma ọ bụ Mmepụta
Usoro usoro a na - enye ndị ọrụ nhazi ụlọ ọrụ aka na ụlọ nhazi ịhazi akwa. Usoro innovation Tech ™ Series nwere nrụgide buru ibu na nke edo edo (Max. 450kg), ọnọdụ edo edo (± 2 Celsius C), yana nnukwu ọkpọ (Max.6cm). Ọ dabara nke ọma na ihe dị iche iche nwere ike ire ọkụ dị ka ATT, akwụkwọ mbufe ọkụ laser, akwụkwọ edozigharị ihe dị ka TPU, yana nnyefe nke chọrọ nrụgide edo edo ọzọ, dị ka Chromaluxe Aluminum panels.
Textile Ọkachamara Ọkachamara Akwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-akpọsa ngwá ahịa
Xinhong kemgbe a tụkwasịrị obi aha na okpomọkụ nyefe ubi afọ 18, na-6 afọ ahụmahụ rosin mmịpụta ụlọ ọrụ. Taa, anyị na-nganga na-eje ozi na narị puku ndị ahịa n'ụwa nile.
Ga-esi na Touch
Baijin Industrial Mpaghara, Baizhang Town, Minqing County, Fuzhou, Fujian Province, China
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Ball Pen Okpomọkụ Press Machine , Oku akụrụngwa maka , Ball Okpomọkụ Press Machine , Obere Label Okpomọkụ Press Machine , Okpomọkụ Press Pen Printer , Okpomọkụ Press Labels ,